ONT ee Orange - internetka ayaa ugu dambeyntii aniga ii shaqeynaya! - SmartMe
Maqaalkani wuxuu u heellan yahay Grzesiek ee HejDom. Isagu wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee iftiimiya wax la mid ah ONT ee Orange, taas oo ugu dambayn igu kaliftay inaan hagitaankan kuu qoro aniga oo dhoola cadeynaya. Laba sano oo halgan iyo dareemayaal ah ka dib, waxaan ugu dambeyn dhihi karaa - Internetka ayaa aniga ii shaqeeya!
Si aan waxbadan uga fahmo casharkaan, waxaan u baahanahay inaan wax yar ka iftiimiyo xaaladdayda haatan. Waxaan ku leeyahay guri dabaq cusub, kaas oo hadda ku jira isbeddel aad u xiiso badan. Horumariyaha iyo warshadaha guud ahaan waxay go'aansadeen inay sameeyaan sanduuq router heellan. Hindise weyn, sax? Sida muuqata haa, laakiin sanduuqa waa bir ... Natiijo ahaan waxaan haysannaa qafis Faraday ah tayada shabakaduna waxyar way liidataa.
MALAHAN oranji, oh waa oranjo
Jacaylka aan u qabo Oranjiga waa mid adag. Dhinaca kale, waxaan u ahaa macaamiishooda daacadda ah ugu yaraan 7 ama 8 sano. Dhinaca kale, waxaan durba u dirayaa kaararka kirismaska ​​waaxda cabashada, maxaa yeelay waxaan kula socdaa qof walba oo halkaas jooga. Isla liinta, iyo si ka sii saxan Funbox 3.0, ayaa ku dhacday qafiskeygii cajiibka ahaa, waxaana la iiga tagay gacanta maahmaahda ah ... waad ogtahay meesha.
Intii lagu jiray labadan sano waxaan awooday inaan la macaamilo laba codbaahiyeyaal, laakiin maaddaama aan boos ka helay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee geeska, taas oo ah saddexagalka Bermuda ee kala duwan, xalku intaas ka dib kuma filneyn. Intaa waxaa sii dheer, markii aan TV-ga ka daaray Oranjiga, shaashadda ayaa inta badan i salaantay - "marin uma lahan kanaalka" Waan soo qaatay, waxaan qabtay qoriga waxaanan go'aansaday inaan beddelo qaddarkayga. Waqtiga lagu hagaajinayo internetka!
ONT gudaha Orange
Waa maxay ONT gudaha Orange? Waa bahal dahab ah. Hawl qarsoon oo aanu farsamo yaqaan kuu sheegi karin. Si dhab ah u hadla, waa uun aalad iftiinka u beddelaysa naxaas (sida qarniga 21aad alchemist). Sida caadiga ah, markay Orange kuu soo saarto internetka, ma bixiso qalabkan, maxaa yeelay looma baahna. Si kastaba ha noqotee, markay kuu soo baxdo inaad u baahan tahay, waa inaad bixisaa PLN 149 dheeraad ah. Qaab dhismeedka ugu horreeya, qiimahan lama heli karo, markaa haddii aad la kulanto xulashada hawl wade, waxaan kugula talinayaa inaad horay u sii weydiiso haddii aad qafis weyn u leedahay router-ka.
Mudanayaal, kulmiyayaashii ayaa soo muuqday maalintii labaad, taas oo aad iiga yaabisay. Wadahadalku wuxuu ahaa mid fudud:
Rakib: Halow, maxaa socda?
Ariel: Internetka ma shaqeynayo - waxaan rabaa ONT
Rakibayaal: Hagaag, waayahay - waanu hubin doonaa waxa socda marka hore.
Ariel: TV-ga ma shaqeynayo, waxaan rabaa ONT
Rakibida: TV-ga ma shaqeynayo maxaa yeelay waxaad ku xirtay fiilada internetka Playstation-kaaga, fiilada ka socota cod-weynaha ayaa aadeysa TV-ga
Ariel: Waxaan sidan yeelnaa. Sayidku xaaskeyga waxba uma sheego, hadana waxaan rabaa ONT.
Rakibayaal: Waayahay, waan shaqeynaa.
Rakibida ONT waxay qaadatay nus saac. Intaa markii ay gaartey, qalabka rakiban ayaa waxyar yaabay markii qufulkeyga smart uu albaabka u xirtey kaligood ... Ka dib markii aan geliyo ONT sanduuqa, oo ah aaladda aan ku xireyno fiilada indhaha hal dhinac, iyo fiilada maarta kan kale, waxaan u wareejin karnay router-ka meel aad ugu habboon.
Router ayaa degay
Qalabka router-ku wuxuu ku degay qolka fadhiga, oo ku ag yaal sanduuqa telefishanka. Tayada shabakadu si aad ah ayey ugu boodday. Waxaan isticmaalay labadayda WiFi ku celcelinta daqiiqado yar kadib waxaan haystay cayn dhan 2.4 GHz iyo 5 GHz oo shabakad ah. Maalin ka hor, shantii qolka jiifka, waan riyoon lahaa.
Ficilka oo dhan wuxuu socday qiyaastii saacad wuxuuna igu kacay PLN 150. Saamaynta? Dhab ahaan wixii aan doonayay ... Dabcan, waxaan qorsheynayaa inaan badalo router dhawaan, laakiin ugu dambeyntii macno ayey sameyneysaa. Markaa haddii aad dhibaatooyin ku qabtid internetka Orange, waxaan rajeynayaa in maqaalkani kaa caawin doono inaad xalliso! Runtii way fududahay oo dhakhso badan tahay, haddii aad isla markiiba samaysana, xitaa waa bilaash 😉